सीइडीबी हाइड्रोपावरको आइपीओ कहिले हुन्छ बाँडफाँट ? – OnlinePahar
सीइडीबी हाइड्रोपावरको आइपीओ कहिले हुन्छ बाँडफाँट ?
२८ माघ २०७७, बुधबार १०:३५ Basanta Khanal	0 Comments	ipo result
काठमाडौं : सीइडीबी हाइड्रोपावरको आइपीओ अर्को हप्ताभित्र बाँडफाँट गर्ने प्रारम्भिक तयारी गरिएको छ । बिक्री प्रबन्धक सनराइज क्यापिटलका अनुसार कोरोना संक्रमणका कारण भेरीफाई गर्ने कर्मचारी आवतजावतमा समस्या भएकोले अर्को हप्ताभित्र मात्र आइपीओ बाँडफाँट गर्ने तयारी गरिएको छ । यद्यपि अझै धेरै काम बाँकी रहेकोले कुन दिन बाँडफाँट गर्ने अन्तिम निर्णय भने भइनसकेको बिक्री प्रबन्धकले जनाएको छ ।
१५ लाख भन्दा धेरै जना आइपीओ पाउनबाट बञ्चित
यता, सीइडीबी हाइड्रोपावरको आइपीओमा माग भन्दा बढी आवेदन परेकाले सेयर पाउन भने भाग्यमै पर पर्नुपर्नेछ । गोलाप्रथाबाट सेयर बाँडफाँट हुनेछ । यसमा कुल २ अर्ब ६३ करोड ४५ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको छ । १७ लाख ३६ हजार ७०० जनाले २ करोड ६३ लाख ४५ हजार ५०० कित्ताका लागि आवेदन दिएका हुन् । यो मागको तुलनामा ११.२५ गुणा बढी हो । यसआधारमा सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिएको २३ लाख ४१ हजार ९५४ कित्तालाई आधार मान्दा २ लाख ३४ हजार १९५ जना आवेदकले १० कित्ताका दरले सेयर हात पार्ने देखिएको छ । १५ लाख २ हजार ५०० भन्दा धेरै जना भने आइपीओ पाउनबाट बञ्चित हुनेछन् । सीइडीबीले वैशाख १७ गतेबाट २१ गतेसम्म कुल २५ लाख १८ हजार २३० कित्ता आइपीओ बिक्री खुला गरेको थियो । जसमध्ये कम्पनीले २% अर्थात ५० हजार ३६५ कित्ता सेयर कर्मचारी र ५% ले हुने १ लाख २५ हजार ९११ कित्ता सेयर म्युचुअल फन्डलाई छुट्याएको थियो । बाँकी २३ लाख ४१ हजार ९५४ कित्ता सेयरमा सर्वसाधारणले आवेदन दिने व्यबस्था थियो ।
क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी केयर रेटिङ्स नेपालले सीइडीबी हाइड्रोपावरलाई केयर एनपी डबल बी (आइएस) इस्यूअर रेटिङ प्रदान गरेको छ । जसले निष्काशनकर्ता कम्पनीको वित्तीय दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा औसत जोखिम रहेको भन्ने जनाउँछ । केयर रेटिङले २०७७ असोज २९ गते उक्त रेटिङ दिएको हो । यो रेटिङ २०७८ असोज २८ गतेसम्म कायम रहनेछ । यस आइपीओको बिक्री प्रबन्धक सनराइज क्यापिटल हो । आइपीओ बिक्रीपछि संस्थापक र सर्वसाधारणको सेयर रेसियो ७०ः३० हुनेछ । हाल यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५८ करोड ७५ लाख ९० हजार छ । आइपीओ बिक्रीपछि भने चुक्ता पुँजी ८३ करोड ९४ लाख १० हजार रुपैयाँ पुग्नेछ।
← पशुपतिमा धेरै शव भएपछि मशिनले मात्रै धान्न नसक्दा, जलाउने यस्तो वैकल्पिक व्यवस्था !
बीमा कम्पनीहरु जेठ १३ गतेसम्म बन्द, बैंक वित्तीय संस्था के हुन्छन् ? →
फेरि आयो ‘नेप्से वाच’को नयाँ अंक, यसपटक पनि तपाईंले पढ्न पाउनुहुनेछ निःशुल्क ( हेर्नुहोस् )